Ireo zavamiaina an-dranomasina pelagic sy benthic, inona avy ireo fahasamihafana? | Ny trondro
Ireo zavamiaina an-dranomasina pelagic sy benthic
Carlos Garrido | | trondro
Ny ranomasina sy ny ranomasina dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo loharano manankarena indrindra, amin'ny lafiny biodiversité, eto ambonin'ny planeta Tany. Ny vahiny ao anatiny dia misy vahiny tsy tambo isaina manao azy ireo ho toerana mahaliana. Ireo mpampiantrano izay miovaova, indrindra, amin'ny endriny, ny habeny, ny lokony, ny fahazarany, ny endrika fahanana sns
Mazava ho azy fa ny tontolo iainana anaty rano dia samy hafa be. Ny toetran'izy ireo dia mety ho samy hafa be, izay misy fiantraikany, amin'ny fomba tena manokana, ny azy ireo fahafaha-honenana na tsia.
Raha ny lojika dia tsy mitovy ny fiainana any amin'ny rano marivo na akaikin'ny morontsiraka. Ao, ny jiro dia be kokoa, ny mari-pana dia miovaova bebe kokoa, ary ny onja sy ny fivezivezin'ny rano matetika sy mampidi-doza. Na izany aza, rehefa midina amin'ny lalina isika dia mahita sary hafa tanteraka. Noho io antony io dia tena tsy mitovy ny zavamananaina miankina amin'ny velaran'ny ranomasina na ny ranomasina izay mampivelatra ny fiainany.
Eto no misy ny teny roa izay mety tsy fantatsika hoe: pelagic y benthic.
1 Pelagic sy benthic
2 Famaritana ny zavamiaina pelagika
3 Trondro pelagic
3.1 Pelaky ny morontsiraka
3.2 Pelagika oseana
4 Matoanteny amin'ny teny pelika
5 Famaritana ny zavamiaina benthic
6 Trondro trondro
7 Matoanteny amin'ny teny bôtika
Pelagic sy benthic
Pelagic dia manondro ny ampahany amin'ny ranomasina izay ambonin'ilay faritra pelagika. Izany hoe, amin'ilay tsanganana rano izay tsy miorina amin'ny talantalana na kaontinanta kontinanta, fa manakaiky kokoa azy. Io no fiparitahan'ny rano izay tsy manana halaliny lalina. Amin'ny lafiny iray, ny benthic dia ny mifanohitra amin'izany. Misy ifandraisany amin'ny zavatra rehetra mifandray amin'ny fanambanin'ny ranomasina sy ny ranomasina.
Ny zavamananaina anaty rano, izay anisany ny trondro, dia miavaka amin'ny fianakaviana lehibe roa: zavamiaina pelagika y zavamananaina benthic.
Manaraka izany, manohy mamaritra ny tsirairay amin'izy ireo izahay:
Famaritana ny zavamiaina pelagika
Rehefa miresaka momba ny zavamiaina pelagika isika dia miresaka an'ireo karazan'olona rehetra monina ireo rano afovoan'ny ranomasina sy ny ranomasina, na akaikin'ny ambonin'izy ireo. Mazava ho azy fa io karazana zavamananaina anaty rano io dia mametra be ny fifandraisany amin'ireo faritra lalina.
Izy ireo dia zaraina amin'ny toerana misy jiro tsara, manomboka eo amboniny ka hatramin'ny 200 metatra ny halaliny. Ity sosona ity dia fantatra amin'ny hoe faritra phiotic.
Marihina fa ny fahavalon'ny zavamananaina rehetra dia ny jono tsy mitanila.
Misy karazany roa ny zavamiaina pelagika: nekton, plakton ary neuston.
Ao anatin'izany ny trondro, sokatra, cetacean, cephalopod, sns. Ireo zavamananaina izay, noho ny fihetsik'izy ireo, dia mahavita manohitra ny onjan-dranomasina mahery.
Izy ireo dia miavaka, amin'ny ankapobeny, amin'ny fananana refy kely, indraindray mikraoskaopy. Izy ireo dia mety ho karazana zavamaniry (fitoplankton) na an'ny karazana biby (zooplankton). Mampalahelo fa ireo zavamananaina ireo, noho ny anatomia, tsy maharesy ny onjan-dranomasina izy ireo, ka notaritaritin'izy ireo.
Izy ireo dia ireo zavamananaina izay nahatonga ny sarimihetsika ambony rano ho fonenany.
Raha mifantoka amin'ilay vondrona mandrafitra ireo trondro pelagic toy izany isika dia afaka manamboatra fizarana hafa, izay mandainga, amin'ny fomba mitovy, miankina amin'ny faritra anaty rano onenan'izy ireo:
Pelaky ny morontsiraka
Ny zavamiaina pelagika amoron-dranomasina dia matetika trondro kely izay miaina amin'ny sekoly lehibe izay mihetsika manodidina ny talantalana kaontinantaly sy akaikin'ny ambonin'izy ireo. Ohatra iray amin'izany ny biby toy ny tery na sardine.
Ao anatin'ity vondrona ity dia misy ny karazana salantsalany sy lehibe izay mifindra monina. Izy rehetra dia samy manana ny mampiavaka azy, na anatomika na ara-batana, tena mitovy amin'ny an'ny havany amoron-dranomasina, na dia tsy mitovy aza ny fomba fihinany.
Na eo aza ny fitomboana haingana sy ny fahavokarana avo, ny hakitroky ny mponina ao aminy dia ambany kokoa, ka mahatonga ny fivoarany miadana. Izany dia miankina amin'ny zava-misy fa iharan'ny jono goavambe izy ireo.
Ny trondro toy ny tuna sy bonito dia ohatra mahazatra amin'ny zavamananaina pelagika any amin'ny ranomasina.
Matoanteny amin'ny teny pelika
Satria ny teny pelagic dia manondro faritra iray amin'ny ranomasina sy ny ranomasina, dia misy koa ny teny izay ampiasaina hanonona azy amin'ny toerana misy azy "abyssal". Ary noho izany, amin'ny fomba anaovantsika firesahana ireo zavamiaina pelagika sy trondro, dia azontsika atao koa ny miantso azy ireo hoe zavamananaina trondro na abyssal.
Famaritana ny zavamiaina benthic
Ireo zavamananaina bénétika dia ireo izay mipetraka ao tontolo iainana ecosystem, tsy toy ny zavamiaina pelagika.
Amin'ireny faritra amin'ny fanambanin'ny ranomasina ireny izay misy hazavana sy mangarahara miseho, amin'ny lafiny kely, eny, hitantsika ny mpamokatra voalohany photosynthesizers (mahay mamokatra ny sakafony manokana).
Efa naroboka ao amin'ny fiaviana aphotic, tsy misy hazavana ary hita any amin'ny halaliny lalina, misy zavamiaina mandany, izay miankina amin'ny taolam-paty sy zavamiaina bitika izay misintona avy amin'ny haavon'ny rano ambonimbony indrindra hamahan-tena.
Tranga hafahafa dia bakteria, amin'ny lafiny iray chemosynthesizers ary amin'ny lafiny iray symbiotic (Miankina amin'ny zavamananaina hafa izy ireo), izay hita any amin'ny faritra mampihoron-koditra toy ny teboka sasany amin'ny havoana afovoan'ny ranomasina.
Raha jerena voalohany, dia tsy mahagaga raha, aorian'ny famakiana ny etsy ambony, dia tsy dia mahazatra antsika loatra ireo zavamananaina benthic. Tsy misy zavatra mety ho lavitra amin'ny fahamarinana. Misy karazana mifandray amin'izy ireo izay tena malaza sy fantatry ny rehetra: ny haran-dranomasina.
Tsy isalasalana fa ny vatoharan-dranomasina dia iray amin'ny firavaka sarobidy indrindra eto an-tany. Na izany aza, ary indrisy, izy ireo ihany koa no atahorana indrindra. Ny teknika fanjonoana sasany, indraindray tena tsy mahazatra loatra, no mamono azy ireo. Miresaka harato harato, ohatra, izahay, izay miteraka olana ara-tontolo iainana lehibe.
Ny zavamananaina maro hafa dia ao anatin'ny fianakaviana benthic lehibe. Miresaka momba ny echinodermia (kintana sy rajako an-dranomasina), ny pleuronectiform (faladia sy ny toy izany), ny cephalopods (horita sy sifotra), ny bivalves y molotra ary karazana sasany amin'ny ahidrano.
Araka ny voalaza tetsy ambony, ao anatin'ny zavamiaina benthic dia ahitantsika ireo karazana trondro voasokajy ho "peluronectiform", an'ny filaharan'ny trondro flounder, akoho tokana ary tokana.
Ireo trondro ireo dia miavaka amin'ny fananana morphology manokana. Ny vatany, voafintina be avy eo, manao sary a endrika fisaka, mamela olona tsy miraika. Ny endasina dia manana symmetria eo anilany izy ireo, miaraka amin'ny maso ny lafiny roa. Symmetry aorin-doha izay manjavona rehefa mivoatra. Ireo olon-dehibe, izay mipetraka eo amin'ny sisiny iray, dia manana vatana fisaka ary ny sasany nalamina teo amin'ny ilany ambony.
Raha ny fitsipika dia izy ireo hazandranomasina sy mpiremby, izay ny fakana azy dia tanterahina amin'ny alàlan'ny teknika fanakanana.
Ny karazany fahita indrindra, satria izy ireo no be mpampiasa indrindra amin'ny sehatry ny fandrahoan-tsakafo sy ny jono, dia ny Saoly ary ny turbot.
Matoanteny amin'ny teny bôtika
Raha mandinika ny boky siansa samihafa natokana ho an'ny taxonomia sy ny fanasokajiana ny fanjakan'ny biby isika dia mety hahita zavamiaina sy benthic miaraka amin'ny "Bentos" o "Benthic".
Tontolo mahavariana ny natiora ary mendrika fizarana miavaka ny ekôzistia anaty rano. Ny miresaka momba ny zavamiaina pelagic sy benthic dia zavatra tena sarotra sy sarotra kokoa. Ity famerenana kely ity dia manasongadina, amin'ny kapoka lehibe, ny antsipiriany izay manavaka ny iray amin'ny iray hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny trondro » trondro » Ireo zavamiaina an-dranomasina pelagic sy benthic
Jose Fernando Obama dia hoy izy:
sary tsara ary famintinana tsara
tsy misy afa-tsy ny manohy toy izao ary misaotra betsaka anao amin'ny calos, efa k, tena ilaina tokoa io
Mamaly an'i jose fernando obama
Javier Chavez dia hoy izy:
toa tena nahaliana ahy ny marina, tena nanampy ahy ny niverina tamin'ity lohahevitra ity, arahabaona.
Mamaly an'i javier chavez
Sakafo trondro namboarina